Posted on 09.03.2019, 22:15 By Goodsite
Iray ao Philippines.
Efa nanandrana rehetra ny fomba nentim-paharazana mba hitady olona iray manokana any Filipina? Moa ve ianao sasatry ny Filipina bar club toe-javatra, avy an-trano ny trano foana, manirery latabatra ho an’ny iray amin’ny ireo tantaram-pitiavana Filipina trano fisakafoanana, loza jamba daty napetraky ny matchmaking namana, any Filipina an-toerana, ny tokan-tena, ny fikambanana, ny tokan-tena dia zava-nitranga sy ny fivoriana miaraka amin’ny tsy misy vokatra? Mampifandray ny tokan-tena dia zato FREE online dating site izay afaka manao namana sy ny hihaona Filipina tokan-tena. Tadiavo ny asa mpiara-miasa, namana vaovao, mangatsiatsiaka daty na ny soulmate, noho ny fitenenana mahazatra na ny fifandraisana maharitra. Hihaona toetra tokan-tena dia ao ny Filipina faritra na manerantany (US tokan-tena, Canada tokan-tena, UK tokan-tena, ny tokan-tena any Eoropa Andrefana sy Aostralia) mitady ny fiarahana amin’ny aterineto, ny namana, ny fitiavana, ny fanambadiana, ny olon-tiany, na ny olona iray fotsiny ny chat na mifanerasera aminy. Hanatevin-daharana ny tsy mitsaha-mitombo ny tokan-tena ny fiaraha-monina ao Filipina sy Mahazo Mifandray amin’ny maimaim-poana ny mailaka, ny karajia, ny IM, bilaogy, sy ny bibidia, fa namana mampiaraka sehatra fiadian-kevitra. Mijery maimaim-poana Filipina manokana ny dokam-barotra sy sary. Mifandray maimaim-poana amin’ny tsara, mahomby, mahafinaritra, mahafaly, sexy Filipina tokan-tena — maimaim-Poana na ny fiampangana na inona na inona. Sign-Up no FIFADIAN-kanina sy maimaim-POANA. TSY sary Nahazoan-Card ILAINA. TSY misy ny vola LANY na inona na inona endri-javatra amin’ny Fampifandraisana ny tokan-tena. Amin’ny Fampifandraisana ny tokan-tena, ny endri-javatra rehetra dia maimaim-poana tanteraka: maimaim-poana ny mailaka, ny voninkazo, ny sehatra fiadian-kevitra, ny bolongana, ny latsabato, ny karatra, ny tahan’ny ny sary, horonan-tsary, chat room, IM, antoko tokan-tena, sy ny maro hafa. Vonona ve ianao? HIARAKA Mampifandray tokan-tena ANKEHITRINY sy ny fifandraisana Filipina tokan-tena maimaim-POANA»dia mety ho ny karazana zazavavy izay ankizilahy hijery sy te kokoa. Saingy tsy ho lasa karazana vehivavy izay fahadisoana ny hanoanana amin’ny zaza ny masony noho ny filan’ny nofo amin’ny lehilahy. Iray ny toetra lehibe indrindra maha-vehivavy dia ny fahafahana hanorina ny lehilahy sy ny hahatonga azy b. Tiako ny mijery sarimihetsika, vakio ny boky, mpilalao volley, badminton, sy ny tenisy. ary echec ny mombamomba azy dia zato marina (afa-tsy ny anarako mazava ho azy) toy ny zaridaina, izaho te-hanana ny mini trano famakiam-boky ao an-tranoko indray andro any, sary ahy avy ny finday, tsy ny sary. Tena malefaka niteny, ho tia mikarakara, ho mora hatonina. Tiako ny mamantatra zavatra, mitsidika toerana hafa, ny mandeha any amin’ny tora-pasika sy ny fandrahoan-tsakafo. Mafy loha, mahaleo tena ary ny zava-miafina amin’ny tony sy mangatsiatsiaka persona. Manana ny ivelan’ny trano, amoron-dranomasina, ary ny tendrombohitra. Mitombo miaraka amin’ny zavaboary manodidina ahy dia nahita ny tenako faly sy maimaim-poana. Tiako mba handeha sy hiaina amin’ny kolontsaina samihafa.
Aho, dia tsy mbola ao anatin’ny fifandraisana alohan’ny Mitady ny tsara kokoa ny antsasaky. Ny olona iray izay aho, dia ho afaka handany ny androm-piainany. Izaho tsy mitady mpiara-miasa vonjimaika. Izaho no lehibe sy mahatoky aho raha nahita ny iray. Ny maha-pitia amin ity taranaka ity dia mampatahotra ny tsy fivadihana. Aho vao tena tsotra, tsara tarehy avy ao anatiny sy nahita fianarana. Tena feno fitiavana sy nidina tety an-tany ny vehivavy. Izaho no mora ny mahazo miaraka. Aho mpandihy, mpirenireny, mpitantara. Tiako niainany ary izaho no hanokatra ny hianatra zava-baovao. Tsotra ny zavatra ho sambatra aho. ny mijery ny masoandro, ny dihy ao ny orana, cuddling. Hi ry zalahy manao ahoana ianao. faly mihaona aminareo rehetra aho tokana sy tsy mbola manambady ary tsy misy ankizy ny fianakaviana sy Ny namana mamaritra ahy ho toy ny namana ny olona, ny marina hatsaram-panahy feno hatsaram-panahy fo mamy ny fikarakarana feno fitiavana sy nidina tety an-tany ny olona. Izaho dia miaina sy miasa ao Taipei. Tsy afaka mamaritra ny tenako, dia afaka miresaka momba izany ny antso an-tariby na eo amin’ny resaka raha izany tsara. Tsy afaka ny hanome anao ny ankamaroan ny fotoana satria ny asako, (mpanampy an-tranony ny fiambenana ny zaza)ny fotoana malalaka dia amin’ny alina ihany no mba afaka manome hafatra vitsivitsy tao amin’ny mandra-maraina. Izaho dia tsotra, fitiavana mikarakara ny fahatakaran-javatra ny vehivavy. Izaho dia sivy amby telopolo taona. taloha efa-janaka roa vavy sy ny zanany lahy.
Ny miasa mafy ny reniny
hmmm. ahoana no tokony aho mihevitra ny tenako? dia izaho tokana tsy manambady, dia foana ny hahita ahy tsotra fa ny namako foana ny hilaza ny momba ahy, tiako mba mahandro, mizara tantara ny fianakaviana, dia ny antitra lamaody iray satria aho hitombo amin’ny Bebe, izany no mahatonga mandraka ankehitriny aho manaitra. Mampifandray tokan-tena tena zato maimaim-POANA. Maro ireo tolotra aterineto fiarahana milaza ho maimaim-poana, ary avy eo dia gaga anareo amin’ny fiampangana ho an’ny endri-javatra toy ny nifandray tamin’ny mpikambana hafa, be dia be ny fikarohana, ny fijerena ny mombamomba azy na ny sary, sns. Mampifandray ny tokan-tena dia tanteraka maimaim-poana-ny-ampiasaina online dating service (maimaim-poana ny zava-drehetra) dia noho ny fankatoavana ny mpikambana ao Filipina. Endri-javatra rehetra eo amin’ny Fampifandraisana ny tokan-tena dia tsy misy fiampangana, saram, nahazoan-dalana, coupons na tsy ampoizina. Hiaraka Ankehitriny maimaim-POANA»
← FILIPINA. Ny toerana sy ny fomba hitsena ny Filipina - Fiainana ao Filipina
Filipina Mampiaraka →
© 2020 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Philippines